Dhaqannada Ruushka: Baba Yaga | Safarka Absolut
Dhaqannada Ruushka: Baba Yaga
maruuzen | | la fahmay
Agoosto 22 waa Maalinta Dhaqanka Caalamiga ah iyo muujinta dhaqankaas oo dadka mideeya waxaana ka mid ah kaftanka, maahmaahyada, qoob ka ciyaarka, sheekooyinka, halyeeyada, muusiga ... Halkaan iyo halkaas waxaa jira sheeko xariir, Ruushkana wuxuu ka jilayaasha dadweynahas ugu caansan waa tan Baba Yaga.
Xaqiiqdii waxay ka gudubtaa xuduudaha maadaama ay ka tirsan tahay dhaqanka Slavic, laakiin xitaa waxay ku boodday sheekooyin aan Slavic ahayn, adduunka majaajillada, majaladaha casriga iyo shineemooyinka. Maanta markaa, Absolut Viajes waxoogaa sheeko-dhaqameed Ruush ah oo ka timid gacanta Baba Yaga hore.
2 Sheekooyinka Baba Yaga
3 Baba Yaga dhaqanka caanka ah
Sidaan horay u sheegnay waa dabeecad ka soo jeeda dhaqanka Slavic waana mid duug ah Waxay ku saabsan tahay a sarraysa ahaansho kaas oo u muuqda qaabka a naag duug ah ama seddex gabdhood oo walaalo ah waxay wadaagaan magac isku mid ah. Wuxuu caadi ahaan ku nool yahay aqal ama buul la yiraahdo oo la sheegay in lagu taageero lafaha digaagga.
Waa a mugdi noqo. Sida ay jiraan sheekooyin ay ugu muuqato sida cun cun, waxaa kale oo jira kuwo kale oo ay tahay a naagta hooyada ah taasi waxay caawinaysaa kuwa ku soo dhaca ama raadiya. Intaa waxaa sii dheer, wuxuu ku xiran yahay nolosha duurjoogta iyo dhammaan Baya Yaga oo ah mid ka mid ah tirooyinka lama ilaawaanka ah ee dhammaan hiddaha bariga Yurub.
Ahaanshaha dabeecad ka gudubta xuduudaha adduunka Slavic, magaciisu wuxuu lahaa noocyo. Ereyga hag waxaa loola jeedaa Ruush hore iyo macnaheedu umuliso, sixirroole, faaliye. Maanta, Ruushka casriga ah, ereyga babushka, ayeeyo, waxay ka timaadaa iyada, tusaale ahaan, ama polishka ayeeyo, sidoo kale. Taasi dhinac, laakiin dhinaca kale sidoo kale waxaa jira qaar aan micno wanaagsan lahayn ama adeegsiga erayga.
Marka, si uun ayey uga timid madmadowgan erayga baba laftiisa in sheekooyinka kala duwan ee ku saabsan dabeecadda dadku ay soo baxaan. Inay ahaato isla mar ahaanta haweeney hooyadeed duug ah iyo karti xumaan.
Oo maxay ka dhigan tahay yaga, cunsurka labaad ee magaca? Etymologically ahaan way adag tahay in la helo asal, laakiin dhowr luqadood oo Slavic ah xididkiisu wuxuu umuuqdaa inuu u eg yahay wax sida xanaaq, cabsi, cabsi, xanaaq, jirro, xanuun...
Sheekooyinka Baba Yaga
Sharaxaadkan ku saabsan magaca iyo mugdiga dabeecadda, maxay yihiin sheekooyinka ku saabsan Baba Yaga? Hagaag, waxaa jira sheekooyin badan oo kusaabsan sixirroolahaan caanka ah waxaana kaheleynaa meel walba. Ukraine, Ruushka iyo Belarus inta badan.
Waa a naag duug ah, xiran koofiyad laga sameeyay lafaha digaagga, a xaaqin, marwalba kudhowaad hoobiye. Buulkiisu wuxuu ka samaysan yahay lafo oo wuxuu ku socdaalaa meel kasta, isagoo awood u lahaan kara dabaysha. Waa waxoogaa cajaa'ib leh maxaa yeelay waxaa lagu qurxiyay dhakado oo gudaha waxaa ku jira shumacyo badan oo cabbirro kala duwan leh, oo shidan isla markaana aan shidanayn. Gudaha, sidoo kale waxaa jira khamri iyo hilib iyo addoommadii spectral yaa u adeega.
Sheekooyin badan ayaa ku sifeeya iyada a haweeney duug ah oo ilko fiiqan leh, maqaar madowna qallalan. Inta badan sheekooyinkaas ay ku dhex cunaan dhibanayaashooda. Laakiin, sheekooyinka kale, kuwa halka ay ku wanaagsan tahay, sharraxaaddu waa halkii ay ahayd haweeney duq ah oo caadi ah.
Waxaad aqrin doontaa dhammaan noocyada sheekooyinka: in cuno carruurta, cuno nafta, go'aamiso taariikhda dhimashada dadka, waa maxay dabacsan, yaa weydiisanaya allabari cunug taa beddelkeeda taajirnimo, in gurigiisu yahay buundada u dhexeysa adduunka kuwa nool iyo dunida kuwa dhintay.
Marka, waxay kuxirantahay sheekada aad aqrisay, waxaad arki doontaa mid ama nooc kale oo ah Baba Yaga, iyo xitaa mida aysan aheyn haweeney duq ah laakiin ay tahay seddex gabdhood oo walaalo ah. Waxaa jira laba sheeko oo caan ahInta kale waan ogahay.
Dareenkaan, seddexda gabdhood ee walaalaha ah, waa sheekada Marwada Tsar, oo la ururiyey qarnigii XNUMXaad Alexander Afanasyev. Halyeeyga waa Ivan, wiilka quruxda badan ee ganacsade, oo la kulma seddexda Baba Yagas.
Marka hore wuxuu ku ordayaa qolka yar iyo walaashiisa ugu horeysa, way wada hadlaan wuxuuna u diraa inuu la hadlo walaashiisa kale, qol la mid ah kan koowaad. Wuu ku celceliyaa ereyadii kii hore, wuxuu ka jawaabayaa isla su aalaha, laakiin uma diro inuu arko walaasha sadexaad iyo tan dambe maxaa yeelay wuxuu u sheegaa haduu ku xanaaqo inuu cuno.
Laakiin wuu kuu digayaa, hadaadan nasiib u lahayn inaad aragto, si taxaddar leh, geesaheeda u qaadatid oo aad weydiisato ogolaansho inaad ku afuufto. Hagaag, ugu dambayntii wuxuu lakulmay kulankaas oo markuu hoonka afuufayo tobanaan shimbirood ayaa soo muuqday midkoodna wuu ku badbaadinayaa asaga oo kaxeynaya.
Sheekada kale ee caanka ah waa tan Vasilisa the Beautiful. Gabadhani waxay la nooshahay hooyadeed aabbeheed iyo labadeeda gabdhood (Cinderella, laga yaabee?). Runtu waxay tahay inay doonayaan inay dilaan iyada oo ay maleegayaan inay sidaas sameeyaan. Waxay isku dayaan dhowr jeer ugu dambeyntiina si toos ah ayey ugu diraan aqalkeeda Baba Yaga maxaa yeelay way ogyihiin inay cuni doonto.
Laakiin taasi ma dhacdo, waxay u qaadataa inay tahay qof guriga ka ilaaliya iyada oo ka dhigaysa inay waxyaabo adag qabato, laakiin gabadha ayaa wax walba si wanaagsan u qabata ka dibna u oggolaanaysa inay gurigeeda ku laabato. Wuxuu la soo noqonayaa siraad haweeney duug ah, siraad sixir ah, oo shideysa isla markaana ka dhigeysa qoyskeeda sharka leh, iyada oo nolosha ku gubaysa. Oo macasalaamey qoys xun oo soo dhowow adduunyo faraxsan maxaa yeelay aakhirka quruxda Vasilisa waxay guursataa tsar.
Labadan xisaabood ayaa tusaale u ah madmadowga ku jira dabeecadda dhaqan ahaaneed ee Baba Yaga: way wanaagsan tahay oo way xun tahay, waa daalim, oo way jilicsan tahay ama caddaalad tahay. Madmadowgaan, ee ku takhasusay takhasuska hiddaha iyo dhaqanka, wuxuu la xiriiraa dabeecadda iyo dheddigga waana tan ka dhigaysa shaxdan mid gaar ku ah sheeko xariirka dhaqanka.
Sababta Hagaag, maxaa yeelay inta badan sheekooyinka yurubiyanka jilayaashu aad ayey u deggan yihiin waadna ogtahay waxa laga filan karo iyaga, ama fududeynta ama hor istaagga, doorarka marwalba waa kuwa xun ama kan wax bixiya. Iyo Baba Yaga waa wax kasta oo la saadaalin karo.
Baba Yaga dhaqanka caanka ah
Halka ay waligeed ahayd dabeecadda dunida slavicIn muddo ah hadda, waxay ka soo gudubtay xuduudo. Sidii aannu nidhi, ayaa ka soo muuqday adduunka majaajilada, telefishanka iyo filimada. Xaalada taxanaha telefishanka, hadaad aragtay OA, waxaa qoray NetflixWaxaad ogaan doontaa in Baba Yaga had iyo jeer ka muuqdo riyooyinka.
Sidoo kale ka muuqda Dragon Ball, Xisaabiyaha Fortune Baba Yaga, waa dabeecad soo noqnoqota Hellboy, ee ku jirta sheeko uu qoray Orson Scott Card (qoraaga Ender's Game), Sixir, taxanaha ah Scooby-Doo!, ciyaarta fiidiyowga Sare u kaca xabaashii Iyo in Castlevania: Sayidkii Hooska iyo waliba taxanaha John dubaalad, kaliya in la magacaabo wax yar oo ka mid ah muuqaalkiisa.
Oo haddii muuqaaladahan oo dhami aysan ku filnayn, wuxuu xitaa ka soo muuqday a degel dumarnimo, Timaha timaha, si hadhow loogu boodo a buug ku saabsan talo bixinta aragtida Baba, "Weydii Baba Yaga."
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dhaqannada Ruushka: Baba Yaga
Waxaan marwalba xiiseynayay inaan wax ka ogaado dhaqamada Ruushka. Markii aan yaraa waxaan haystay buug sheeko oo Ruush ah waxaana jiray ereyo dahsoon sida "Baba Yaga".
Mahadsanid hada waxaan helay sharaxaad wanaagsan.
Jawaab Lilian Hernandez
Prati, waa mid ka mid ah xaafadaha ugu raaxada badan Rome